हाइब्रिड कार्डियो भास्कुलर शल्यक्रिया कक्षसहित अत्याधुनिक एनेक्स भवन सञ्चालनमा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
करियर कोभिड-१९ क्यान्सर खोप छाला टेक्नोलोजी फर्मा अपडेट मिर्गौला मुटु सम्पादकीय हस्पिटल
हाइब्रिड कार्डियो भास्कुलर शल्यक्रिया कक्षसहित अत्याधुनिक एनेक्स भवन सञ्चालनमा
२०७७, २० कार्तिक बिहीबार १३:५४ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रन्सप्लान्ट सेन्टरले मुटु, फोक्सो र रक्तनलीको विशेष उपचारका साथै पठनपाठन र अनुसन्धान पनि अगाडी बढाउने भएको छ ।
११ वर्ष अघि स्थापना भएको सेन्टरले मुटु र फोक्सोका बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै महारजगञ्जस्थित आफ्नै परिसरमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न एनेक्स भवन बनाएको छ । एक रोपनी क्षेत्रफलमा ९० करोड रुपियाँ भन्दा बढी लागतमा बनाइएको ७ तले भवनमा २५ वटा जेनरल शय्या, ४ वटा आइसियु शय्या, ११ वटा क्याविन र एउटा भिभिआइटी सुटको व्यवस्था गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।
सेन्टरले नेपालमै पहिलो पटक हाइब्रिड कार्डियो भास्कुलर शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसमा एकैपटक शल्यक्रिया र क्याथल्याबको काम गर्न सकिने सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले मुुटुमा स्टेन्ट राख्नुपरेमा क्याथल्यावमा गरिन्छ भने मुटुको बाइपास गर्नुपरेमा अपरेशन कक्षमा गरिन्छ । तर यस हाइब्रिड अपरेटिङ थिएटरमा एकैठाउमा मुटुको स्टेन्ट पनि हाल्न सकिन्छ र त्यहि मानिसको बाइपास गर्नुपर्ने भएमा सोहिसमयमा शल्यक्रिया पनि गर्न सकिन्छ ।
हरेक वर्ष ८० हजारभन्दा बढी मुटु, फोक्सो र रक्तनलीका बिरामीको उपचार गर्ने सेन्टरले अब अनुसन्धानका साथै पठनपाठन पनि गराउने भएको छ । यस्तै शल्यक्रियापछि डिस्चार्ज हुने बिरामीलाई सम्बन्धित चिकित्सकले भर्चुअल विधिबाट जाँच गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कोरोना भाइरसका गम्भिर बिरामी बढ्न थालेपछि सेन्टरले यसैसातादेखि २५ शैय्यालाई एच्डियो कोभिड युनिटका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । मुटु र फोक्सोकोस्तरिय उपचारका लागि बिरामीले विदेश जानु नपर्ने सेन्टरको दाबी छ ।
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ
प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ नेपालको अध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की निर्वाचित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की निर्वाचित हुनुभएको
अमेरिकामा कोभिड-१९ सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि
जनस्वास्थ्य सरोकार, वासिङ्टन । अमेरिकाको संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो हप्तामा कोभिड-१९ सङ्क्रमणबाट दैनिक
बेलायतमा एकै दिन ५१ हजार कोरोना सङ्क्रमित थपिए
जनस्वास्थ्य सरोकार, लण्डन । बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण झन् बढेको देखिएको छ । बेलायतका स्वास्थ्य
ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्ध फाइजरको बुस्टर डोज प्रभावकारी
जनस्वास्थ्य सरोकार । फाइजर बायोएनटेकले कोभिडविरुद्ध उत्पादन गरेका खोपको बूस्टर मात्राले ओमिक्रोन भेरियन्ट विरुद्ध प्रभावकारी